October 2018 – Trend.com.mm
လူသန်းပေါင်းများစွာထဲကမှ ကိုယ့်အပေါ်မေတ္တာစစ်ထားတဲ့လက်တွဲဖော်အစစ်ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဒီလိုရှိတယ်ဗျ …ရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ကောင်းမှ ဘာကြီးဖြစ်နေမှဆိုတာမျိုးတွေလည်းသတ်မှတ်ထားလို့မရပြန်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ရင်ဘတ်ကြီးထဲကနေခံစားမိပြီးသူရဲ့အပြုမူ သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေကိုကြည့်ပြီးသူဟာ ကိုယ့်ဘ၀အတွက်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲကသိနေတာမျိုးပါ။ ကိုယ်ကလည်းသူကလွဲရင်တစ်ခြားသူကို ရင်ခုန်ရင်ခုန်မယ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ယူတို့ရဲ့ဘ၀လက်တွဲဖော်အစစ်မှန်ကိုဘာကြည့်ပြီးရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သင့်လဲ…
အခုခေတ်မှာ ဖောက်ထွင်းမှုတွေ လုယူမှုတွေကလည်း တစ်နေ့တစ်ခြားများပြားလို့နေပါတယ်။ အိမ်တစ်ခုလုံးကို CCTV တပ်ထားနိုင်ရင်တော့လည်းတစ်မျိုးပေါ့လေ။ သို့ပင်မဲ့နေရာတိုင်းကိုတတ်ဖို့ကြတော့လည်းခက်သား …ဆိုတော့ ကိုယ်နေတဲ့အခန်းကိုယ်နေတဲ့အိမ်ကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on သင့်အိမ်ကိုတစ်စိမ်းခိုးဝင်ထားတယ်ဆိုတာ ဘယ်အချက်တွေနဲ့ပြန်စစ်ကြည့်လို့ရလဲ…
ယောက်ျားလေးတွေက သူတို့နဲ့အရပ်ရွယ်တူရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေ၊သူတို့ထက်အရပ်ရှည်တဲ့မိန်းကလေးတွေထက် အရပ်ပုပုကောင်မလေးတွေကိုသာပိုပြီးသဘောကျရွေးချယ်ကြပါသတဲ့။လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေအရ ယောက်ျားလေးတွေဟာအရပ်ပုပု Cuttie လေးတွေကို ဒီလိုအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ပိုပြီးသဘောကျနှစ်သက်ကြတာလို့သိရပါတယ်။ *ယောကျာ်းလေးတွေဟာ အရပ်ပုပုကောင်မလေးတွေကိုရင်ခွင်ထဲထွေးပွေ့ထားရတာသဘောကျကြတယ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on အရပ်ပုပုကောင်မလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေပိုပြီးသဘောကျနှစ်သက်ရတဲ့အကြောင်းရင်း…
အခုခေတ်မှာ မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ သားအိမ်ရောဂါ တွေကို တော်တော်များများခံစားလာကြရပါတယ်။ အပျိုမှ အအိုမှရယ်ထက် ပျိုပျိုအိုအို အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်အရေးပါတဲ့သားအိမ်ကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on မိန်းကလေးတိုင်းသိထားသင့်တဲ့သားအိမ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ရောဂါတစ်ချို့အကြောင်း
မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုပြီးအိပ်ချိန်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသင်ကြားဖူးကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ ဘာလို့လိုအပ်ရတာလဲဆိုတာတော့ သိသူရှားပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအနေနဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ယောကျာ်းလေးတွေထက် အိပ်ချိန်ပိုပြီးလိုအပ်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးသွားပါမယ်။ National Sleep » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on မိန်းကလေးတွေက ဘာလို့ ယောက်ျားလေးတွေထက် အိပ်ချိန်ပိုလိုအပ်ရတာလဲ?
Fan တွေအတွက်တော့ နောက်ထပ်ဂုဏ်ယူစရာသတင်းတစ်ခုပါပဲ။ SM Entertainment ရဲ့အဆိုအရ နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာမယ့် EXO ရဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on Pre-Order နဲ့တင် အရောင်းရဆုံးစံချိန်ချိုးသွားပြန်တဲ့ EXO
Relationship ဆိုတာခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာပါ။ဒီလိုခက်ခဲရတဲ့ကြားထဲ ဒီအချက်သုံးချက်ကိုမလိုက်နာဘူး၊ဒီအချက်သုံးချက်မရှိဘူးဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘယ်လောက်ချစ်ပါတယ်ပြောပြော သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးက ရေရှည်တည်မြဲတဲ့အချစ်ရေးမျိုးလုံးဝဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုအချက်တွေလဲ? *** မျှဝေခံစားခြင်း *ငါမှန်တယ်လို့သက်သေမပြခင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမြင်တွေကိုဖလှယ်ပါ။နားလည်ဖို့ကြိုးစားပါ။စိတ်ရှည်သည်းခံပြီးနားထောင်ပါ။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ဒီ၃ချက်ကိုမလိုက်နာနိုင်ရင် ပျော်ရွှင်ခိုင်မြဲတဲ့အချစ်ရေးမျိုး ဘယ်တော့မှမရနိုင်…
ထောပတ်သီးစားပြီးရင် အစေ့ကိုလွှင့်မပစ်ပါနဲ့လို့ အကြံပေးပါရစေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထောပတ်သီးအသားအနှစ်တင်မကဘူး။ထောပတ်သီးအစေ့ကပါ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပအတွက်အသုံးဝင်နေပါတယ်။ထောပတ်သီးစေ့တွေက ဘယ်လိုအသုံးဝင်တာလဲ အတူတူဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင် *Glow Skin » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ယူတို့လွှင့်ပစ်နေတဲ့ ထောပတ်သီးစေ့တွေမှာ ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရှိတယ်
“စကားပြောသောသက်မဲ့များ”ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကေဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြားမှာ နာမည်ကျော်ကြားရေပန်းစားခဲ့တဲ့ “Partners For Justice” ဇာတ်လမ်းတွဲကိုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးထွက်ရှိဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ MBC ကစီစဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ဒုတိယပိုင်းထွက်ရှိလာတော့မယ့် “Partners For Justice”ဇာတ်လမ်းတွဲ
ငယ်ငယ်တုန်းကဖင်တုန်းအောင်ကြောက်ခဲ့ကြတာလေးတွေ သတိရကြမယ်ထင်ပါရဲ့။ လူကြီးတွေမှာလည်းကိုယ်တွေကိုထိုင်မရရင် ကိုယ်တွေကြောက်နိုင်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲဖြဲခြောက်ကြရတာမလား 😛 တစ်ခါတစ်ခါပြန်စဉ်းစားမိရင် ရယ်စရာလည်းကောင်းသလို အမှတ်တရလည်းဖြစ်စေပါတယ်။ အခုချိန်ထိကိုယ်တွေတောင်ကိုယ်တွေသားသမီးတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြန်ခြောက်နေကြမလား။ ဒါပင်မဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on ငယ်ငယ်တုန်းကကြောက်ခဲ့ရတဲ့ဒေဝေါကြီးတွေထမင်းလုံးတစ္ဆေတွေဆိုတာ…